Maitiro Ekuverenga Forex Charts, anotanga Kutungamira kuCandlestick, Line uye Bar machati
dzidzo - Zvinyorwa & Tutorials - forex basics nyaya - Maitiro ekuverenga Forex machati
A Forex Chati inotsanangurwa se mufananidzo wekuona yemutengo wemari yepazera pane imwe nguva yakatarwa.
Inotaridza zviitiko zvevatengesi zviri kuitika kwenguva yakatarwa yekutengesa zvisinei nenguva iyo mumaminitsi, maawa, mazuva kana kunyange mavhiki. Iko shanduko yemutengo inoitika panguva isina kujairika kana pasina munhu anogona kutarisira chaizvo sevatengesi, isu tinofanirwa kugona kubata njodzi dzekutengesa kwakadaro uye kuita mukana uye ndipo pano pauchazoda rubatsiro rwechati.
Zviri nyore kwazvo kushandisa machati sezvo iwe uchigona kunzwisisa nezvekuchinja kwemitengo nekungo tarisa kwavari. Pane chati, iwe uchaona kuti dzakasiyana siyana dzemari dzinofamba sei uye unogona kuona tsika yekukwira kumusoro kana pasi pane imwe nguva. Izvo zvine chekuita nedemo mbiri uye y-axis iri kurudyi, uye inomira pamwero wemutengo apo nguva inoratidzwa kurudyi iro riri iro x-akabatana.
Munguva yakapfuura, vanhu vaishandisa maoko kudhirowa machati asi mazuva ano, pane software inogona kuronga ivo kubva kubva kuruboshwe kuenda kurudyi Mhiri x-akabatana.
Mashandiro emutengo chati
Chati yemutengo inoratidza mutsauko mukuda uye kupihwa uye inokwana yega yega yekutengeserana kwako yekutengesa nguva dzese. Kune akasiyana nhau zvinhu iwe zvauchawana mune chati uye izvi zvinosanganisira ramangwana nhau uye kutarisira zvakare izvo zvinobatsira vatengesi kugadzirisa mitengo yavo. Nekudaro, nhau dzinogona kunge dzakasiyana neidzo dzinouya mune ramangwana, uye panguva ino, vatengesi vanozogadzirisa zvimwe zvakare nekuchinja mitengo yavo. Izvi zvinopfuurira uye mberi sezvo kutenderera kunoenderera mberi.
Kunyangwe zviitiko zvacho zviri kuuya kubva kumaalgorithms mazhinji kana vanhu, chati inovasanganisa. Zviri munzira iyi imwechete iwe unowana hwakasiyana ruzivo pane chati kungave kubva kune wekutengesa kunze, yepakati bhangi, AI, kana kunyange vatengesi vekutengesa maererano nezvekutengesa kwavo.
Mhando dzakasiyana dze Forex machati
Kune mhando dzakasiyana dzemakarati mu Forex asi anonyanya kushandiswa uye anozivikanwa ndeaya mutsara machati, machati, uye chigadziko.
Iyo Line chati iri nyore kupfuura ese. Inodhonza mutsetse kuti ubatanidze kuvhara mitengo uye nenzira iyi, inoratidza kusimuka uye kudonha kwemari yakapetwa nenguva. Kunyangwe iri nyore kutevera, haina kupa vatengesi ruzivo rwakakwana pamaitiro emitengo. Iwe unozoona chete mushure menguva yekuti mutengo wakapera paX uye hapana zvimwe.
Nekudaro, inokubatsira iwe mukuona nyore maitiro uye nekuenzanisa nemitengo yekuvhara yenguva dzakasiyana. Iine mutsara chati, iwe unogona kuwana iyo yekutarisa kwekufamba mumitengo sezvakaita muEUR / USD muenzaniso pazasi.
Mukuenzanisa neye mutsara chati, mabhaja machati akaomarara kunyangwe ichipfuura mutsetse mukupa zvakakwana ruzivo. Bar charts inopawo maonero ekuvhura, kuvhara, kwakakwirira uye kwakaderera mitengo yezvipenga zvemari. Pazasi peiyo axis yakamira iyo inomiririra yehuwandu hwekutengeserana yeiyo mari yemari, iwe uchawana mutengo wakaderera wekutengesa panguva iyoyo nepo yepamusoro iri pamusoro.
Iyo yakamhara hash inoratidza mutengo wekuvhura kuruboshwe rwechati chebhari uye mutengo wekuvhara kurudyi.
Nekuwedzera kushomeka mukuchinja kwemitengo, mabara anowedzera ivo pavanoderera kana kudzikira kwadzikira. Uku kusanduka kuri kukonzerwa nemhando yekuvakwa kwebar.
The chiripasi nokuti EUR / USD peya Achakuratidzai mufananidzo wakanaka sei kubhawa chati okuzvikudza zvakafanana.
Nechigadziko machati vanoshandisa wehunyambiri mutsetse kuratidza mukuru kusvikira-shoma zvokutengeserana neeSultan sezvinoita sei vamwe Forex machati kuita zvakare. Pane zvakawanda kutigumbura uchawana pakati izvo zvinoratidza kuvhura nokuvhara mutengo neeSultan.
A mavara kana akazara pakati misa nzira kuti yokupedzisira nomutengo mari mbiri dererei pane ayo mutengo yokutanga. Ukuwo, kana pakati chinogumbura ane zvakasiyana ruvara kana zviri unfilled, ipapo akavharwa nemutengo kupfuura one akazarurwa.
Nzira Yokuverenga Nyeredzi Matikiti
Kuti kuverenga chemwenje chati, unofanira kutanga kunzwisisa kuti anouya idzodzo mbiri; mutengesi uye mutengi makenduru sezvinoita kuona pazasi.
Izvi zviviri Mwenje idzodzo naivowo uve muzvinashawo mashoko anokosha chaizvo. Idzi dzinosanganisira:
The mutema kenduru iri kupota chena rinomiririra mutengi uye rinotsanangura kuti mutengi nesimba ari kupiwa nguva nekuti pachiyero yokupedzisira mutengo wakakwirira kupfuura hwomukova.
The tsvuku kenduru iri kupota dema rinomirira mutengesi uye rinotsanangura kuti mutengesi nesimba ari kupiwa nguva nekuti pachiyero yokupedzisira mutengo uri mudiki pane kuti hwomukova.
The kwevari yakaderera uye mutengo mukuru tsanangura kuti yakadereresa mutengo uye soro mutengo runowanika munguva akasarudzwa.
Kana usingazive mabasa Forex, iwe vakasungwa kuti zvikanganiso anoverengeka uye danho rokutanga mukudzivirira kwakadaro kubva zvichiitika ndiko kuziva sei kuverenga charts. Pane zvakawanda siyana Forex machati asi vatatu tava pachena pano ndivo pamusoro ndivo. Unogona kuenda yaanopinda unonzwa chakakunakira uye kunzwisisa kuti machati kushanda pamberi Diving munyika yose Forex.